ကျန်းမာခြင်း ၊ ဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အင်ကြင်းကျောက် အကြောင်း - Barnyar Barnyar
March 14, 2022 KNOWLEDGE 0
မွနျမာအချေါအငျကွငျးကြောကျသညျ ဂရိဘာသာ petra မှ ဆငျးသကျလာပွီး ကြောကျသားအသှငျပွောငျးသှားသော သဈပငျ သဈကိုငျး သဈသား ဟု အဓိပ်ပါယျရပါသညျ .. အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ petrified wood ဟု ချေါဝျေါပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အငျကွငျးကြောကျသညျ အငျကွငျးပငျတဈမြိုးထညျးမှ ဖွဈသောကြောကျကို ဆိုသညျမဟုတျဘဲ မညျသညျ့သဈပငျ သဈကိုငျး သဈသားမှ အသှငျပွောငျးဖွဈလာသောကြောကျမြားကို အငျကွငျးကြောကျ ဟု ယဘြေူယသုံးစှဲသော နာမညျဖွဈပါသညျ ….
ကမ်ဘာပျေါရှိ အငျကွငျးကြောကျမြားသညျ လှနျခဲ့သော နှဈသနျးပေါငျး ၅ သနျး မှသနျး ၂၀၀ အကွားတှငျပေါကျရောကျခဲ့သော သဈပငျ သဈသား သဈကိုငျးမြား၏ ရုပျကွှငျးမြားဖွဈကွပါသညျ..
မွနျမာနိုငျငံအတှငျးတှငျတှရေ့သော အငျကွငျးကြောကျမြား မှာ နှဈသနျးပေါငျး ၅ သနျး မှ သနျး ၁၇၀ ကွား ရှိသညျဟု ဖျောပွထားသညျကို တှရေ့ပါသညျ .လှနျခဲ့သော နှဈသနျးပေါငျးမြားစှာက ကမ်ဘာပျေါတှငျ ပေါကျရောကျနသေော သဈပငျမြားသညျ လဲကသြဆေုံးသှားပွီး သဲနုနျးမွမြေား ဖုနျးလှမျးခံရခွငျး မီးတောငျခြျောပွာမြား ဖုံးလှမျးခံရခွငျးတို့ကွောငျ့ မွမေကျြနှာပွငျအောကျသို့ ရောကျရှိခဲ့ရပါသညျ ..
ကမ်ဘာမွေ အပျေါယံလှာတှငျ အပေါမြားဆုံးဖွဈသော ဆီလီကာ သလငျး ဓာတျပစ်စညျးတို့ တိုးဝငျဓာတျပွုခွငျးကို ခံကွရပါသညျ.. သဈပငျသဈသား၏ ဆဲလျမြားထဲသို့ အောကျဆီဂငျြ နှငျ့ လဲလှယျ ဓာတျပွုရပါသညျ နှဈပေါငျးမြားစှာ မွကွေီးထု၏ ဖိအား အပူခြိနျ တို့ကွောငျ့ မပကျြစီးဘဲကနျြနသေညျ့သဈပငျ သဈသား အစိတျအပိုငျးမြားသညျ ကြောကျတုံးအဖွဈပွောငျးလဲသှားရပါသညျ …
မွကွေီးထု၏ ဖိအား အပူခြိနျ နှငျ့ ဓာတျပွုသညျ့ ပစ်စညျးမြား အပျေါမူတညျ၍ နရောအသီးသီးတှငျ အရညျအသှေး အမြိုးမြိုး ကှဲပွားစှာ တှရေ့လရှေိ့ပါသညျ .. ဓာတျပွုသညျ့ ပစ်စညျးမြားရောနှောပါဝငျမှုကွောငျ့ အရောငျအမြိုးမြိုး စှဲထငျရပါသညျ …
ကာဗှနျ ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ အနကျရောငျ, ကိုဘော့ ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ အစိမျးရောငျ အပွာရောငျ, ခရိုမီယံ ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ အစိမျးရောငျ, အပွာရောငျ, ကော့ပါး ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ အစိမျးရောငျ, အပွာရာငျ, အိုငျးယှငျးအောကျဆိုကျ ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ အနီ , အညို , အဝါရောငျ, မငျးဂနိ ဓာတျပွုမှုကွောငျ့ ပနျးရောငျ လိမ်မျောရောငျ, မနျဂနိအောကျဆိုကျ ဓာတျပွုမှုကွောငိ့ အဝါရောငျ အနကျဖြော့ အစရှိသဖွငျ့ ကြောကျတှငျ အရောငျမြားစှဲထငျရပါသညျ …
ကမ်ဘာပျေါတှငျ အငျကွငျးကြောကျကို နိုငျငံပေါငျး ၂၇ နိုငျငံတှငျ တှရှေိ့ရသညျဟုသိရပါသညျ … သွစတေးလြှ , အာဂငျြတီးနား , ဘယျလျဂြီယံ , ဘရာဇီး , ကနဒေါ , တရုပျနိုငျငံ အနောကျမွောကျပိုငျး , ခကျြ , ဂြာမဏီ , အီကှဒေေါ ,အီဂဈြ , ပွငျသဈ , ဂရိ ,ဟနျဂရေီ , အိန်ဒိယ , အငျဒိုနီးရှား , မွနျမာ , အစ်စရေး , လဈဗြား , နမျဘီးယားနယူးဇီလနျ , ဆျောဒီအာရဗြေ , ထိုငျး , ယူကရိနျး , အင်ျဂလနျ နှငျ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု တို့တှငျ တှရေ့သညျဟု သိရပါသညျ …
အငျကွငျးကြောကျ ၏ အရညျအသှေးကို လိုကျ၍ တကီလိုလြှငျ $ 1 မှ $20 အထိ အမြိုးမြိုး ရငျေးဝယျကွသညျကိုတှရေ့ပါသညျ … အလှနျရှားပါးသော အခကျြမြား ပါရှိသညျ့ ကြောကျမြားသညျ တကီလို $100 ကြျော ရောငျးခသြညျကို လလေ့ာသိရှိရပါသညျ .. နိုငျငံတကာ မှ အငျကွငျးကြောကျ ပညာရှငျမြား လကျခံတငျပွထားသညျ့ ကြောကျကို တနျဖိုးတကျစသေော အခကျြမြား , တနျဖိုးကစြသေော အခကျြမြား ကို ဖျောပွပေးပါမညျ …
လှပ၍ တောကျပသော အရောငျရှိရမညျ အရောငျ အသှေး စုံလငျစှာ ပါရှိရမညျ အလငျးမှုနျ မှ အလငျးပေါကျ ကြောကျသားဖွဈရမညျ အဂိတျ (သို့) အိုပယျ တိုးဝငျနသေော ကြောကျသားဖွဈရမညျ သဈသား အမြှငျအကွောမြား ထငျရှားစှာ ပါရှိရမညျ အပငျ ၏ သဈသား ၏ အခေါကျအတိုငျး မပကျြစီးဘဲ လှပစှာ ရှိရမညျ
အခကျအလကျမြား အပေါကျကွီးမြား စသညျဖွငျ့ မကြိုးမပဲ့ ရှိနရေမညျ အပငျစားသော ပိုးကောငျ အငျးဆကျကွီး ကောငျမြား အပငျအတှငျး ကြောကျဖွဈလြှကျ ပါရှိရမညျ အငျကွငျးကြောကျကို တနျဖိုးကစြသေော အဓိက အခကျြမြား မှဲခွောကျခွောကျ အရောငျရှိနသေော အလငျးပိတျသော ကြောကျသားပှသောရှံ့မြား ထုံးဂြိုးမြား ပါမြားစှာ ပါနသေော အခကျြမြားသညျ တနျဖိုးကစြပေါသညျ..
ကမ်ဘာ နိုငျငံအခြို့ တှငျ ၁၉၇၂ ခုနှဈခနျ့ မှ စတငျ၍ အငျကွငျးကြောကျ အလှဆငျပစ်စညျးမြား ထုတျလုပျ ရောငျးဝယျ သုံးစှဲနကွေပွီ ဖွဈပါတယျ ..ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ မကှေးတိုငျး ဒသေကွီး , မနျးလေးတိုငျးဒသေကွီး စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး နှငျ့ ကခငျြပွညျနယျ တို့တှငျ အငျကွငျးကြောကျမြား တှနေို့ငျပါသညျ ..
အငျကွငျးကြောကျမြားသညျ ကြောကျစိမျးမြားကဲ့သို့ တနရောထဲတှငျ စုပွုံဖွဈပျေါနခွေငျးမရှိပါ .. ဟိုနရော တဈခု ဒီနရော တဈခု ပွနျ့ကြဲ၍သာ တှနေို့ငျပါသညျ .. သို့ဖွဈ၍ လုပျကှကျမြား ရယူ၍လုပျကိုငျရနျ ခကျခဲလှပါသညျ ..
လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၂၀၀ ကြျော မှ ယနအေ့ထိ ကြောကျစိမျးမြား မြားစှာထုတျယူနိုငျသျောလညျး အငျကွငျးကြောကျကို မညျသညျ့နိုငျငံတှငျ မှ ကြောကျစိမျးမြားထုတျသလို ပေါမြားစှာ ထုတျယူနိုငျခွငျးမရှိပါ .. တှရေ့ခဲသောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ ရှားပါးခွငျး ဂုဏျသတ်တအပွညျ့ရှိသညျကို တှရေ့ပါသညျ .. မပကျြမစီးဘဲ နှဈသနျးပေါငျးမြားစှာ က ဖွဈပျေါခဲ့ပွီး မာဆငျ့ ၇ ရှိသော တာရှညျခံသညျ့ သတ်တိလညျးရှိပါသညျ .
အရောငျအသှေး အမြိုးနှငျ့ လှပသော သတ်တိလညျးရှိပါသညျ.. အငျကွငျးကြောကျကို အိမျခွံအတှငျး ထားရှိလြှငျဖွဈစေ ဝတျဆငျလြှငျဖွဈစေ ကနျြးမာခွငျး ဥစ်စာ ကွှယျဝခွငျး အသကျရှညျခွငျး ပြျောရှငျခွငျး တို့ကို ပေးစှမျးသညျဟု ရှေးဟောငျးဂရိစာပမြေား နှငျ့ မွနျမာ့လောကီ ပညာရှငျမြား က မှတျတမျးမြား ဆိုခဲ့ကွပါသညျ
သို့ဖွဈပါ၍ မွနျမာ့ အငျကွငျးကြောကျမြားကို မွနျမာမြား ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပွီး အကြိုးကြေးဇူးမြား ရရှိပါစကွေောငျး ဆုတောငျးမတ်ေတာ ပို့သအပျပါသညျ..
မြန်မာအခေါ်အင်ကြင်းကျောက်သည် ဂရိဘာသာ petra မှ ဆင်းသက်လာပြီး ကျောက်သားအသွင်ပြောင်းသွားသော သစ်ပင် သစ်ကိုင်း သစ်သား ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည် .. အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် petrified wood ဟု ခေါ်ဝေါ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အင်ကြင်းကျောက်သည် အင်ကြင်းပင်တစ်မျိုးထည်းမှ ဖြစ်သောကျောက်ကို ဆိုသည်မဟုတ်ဘဲ မည်သည့်သစ်ပင် သစ်ကိုင်း သစ်သားမှ အသွင်ပြောင်းဖြစ်လာသောကျောက်များကို အင်ကြင်းကျောက် ဟု ယျေဘူယသုံးစွဲသော နာမည်ဖြစ်ပါသည် ….
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အင်ကြင်းကျောက်များသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၅ သန်း မှသန်း ၂၀၀ အကြားတွင်ပေါက်ရောက်ခဲ့သော သစ်ပင် သစ်သား သစ်ကိုင်းများ၏ ရုပ်ကြွင်းများဖြစ်ကြပါသည်..
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်တွေ့ရသော အင်ကြင်းကျောက်များ မှာ နှစ်သန်းပေါင်း ၅ သန်း မှ သန်း ၁၇၀ ကြား ရှိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည် .လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေါက်ရောက်နေသော သစ်ပင်များသည် လဲကျသေဆုံးသွားပြီး သဲနုန်းမြေများ ဖုန်းလွမ်းခံရခြင်း မီးတောင်ချော်ပြာများ ဖုံးလွမ်းခံရခြင်းတို့ကြောင့် မြေမျက်နှာပြင်အောက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ရပါသည် ..
ကမ္ဘာမြေ အပေါ်ယံလွှာတွင် အပေါများဆုံးဖြစ်သော ဆီလီကာ သလင်း ဓာတ်ပစ္စည်းတို့ တိုးဝင်ဓာတ်ပြုခြင်းကို ခံကြရပါသည်.. သစ်ပင်သစ်သား၏ ဆဲလ်များထဲသို့ အောက်ဆီဂျင် နှင့် လဲလှယ် ဓာတ်ပြုရပါသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မြေကြီးထု၏ ဖိအား အပူချိန် တို့ကြောင့် မပျက်စီးဘဲကျန်နေသည့်သစ်ပင် သစ်သား အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျောက်တုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားရပါသည် …
မြေကြီးထု၏ ဖိအား အပူချိန် နှင့် ဓာတ်ပြုသည့် ပစ္စည်းများ အပေါ်မူတည်၍ နေရာအသီးသီးတွင် အရည်အသွေး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားစွာ တွေ့ရလေ့ရှိပါသည် .. ဓာတ်ပြုသည့် ပစ္စည်းများရောနှောပါဝင်မှုကြောင့် အရောင်အမျိုးမျိုး စွဲထင်ရပါသည် …
ကာဗွန် ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် အနက်ရောင်, ကိုဘော့ ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် အစိမ်းရောင် အပြာရောင်, ခရိုမီယံ ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် အစိမ်းရောင်, အပြာရောင်, ကော့ပါး ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် အစိမ်းရောင်, အပြာရာင်, အိုင်းယွင်းအောက်ဆိုက် ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် အနီ , အညို , အဝါရောင်, မင်းဂနိ ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် ပန်းရောင် လိမ္မော်ရောင်, မန်ဂနိအောက်ဆိုက် ဓာတ်ပြုမှုကြောငိ့ အဝါရောင် အနက်ဖျော့ အစရှိသဖြင့် ကျောက်တွင် အရောင်များစွဲထင်ရပါသည် …
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်ကြင်းကျောက်ကို နိုင်ငံပေါင်း ၂၇ နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည်ဟုသိရပါသည် … သြစတေးလျှ , အာဂျင်တီးနား , ဘယ်လ်ဂျီယံ , ဘရာဇီး , ကနေဒါ , တရုပ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း , ချက် , ဂျာမဏီ , အီကွေဒေါ ,အီဂျစ် , ပြင်သစ် , ဂရိ ,ဟန်ဂေရီ , အိန္ဒိယ , အင်ဒိုနီးရှား , မြန်မာ , အစ္စရေး , လစ်ဗျား , နမ်ဘီးယားနယူးဇီလန် , ဆော်ဒီအာရေဗျ , ထိုင်း , ယူကရိန်း , အင်္ဂလန် နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့တွင် တွေ့ရသည်ဟု သိရပါသည် …
အင်ကြင်းကျောက် ၏ အရည်အသွေးကို လိုက်၍ တကီလိုလျှင် $ 1 မှ $20 အထိ အမျိုးမျိုး ရေင်းဝယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည် … အလွန်ရှားပါးသော အချက်များ ပါရှိသည့် ကျောက်များသည် တကီလို $100 ကျော် ရောင်းချသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါသည် .. နိုင်ငံတကာ မှ အင်ကြင်းကျောက် ပညာရှင်များ လက်ခံတင်ပြထားသည့် ကျောက်ကို တန်ဖိုးတက်စေသော အချက်များ , တန်ဖိုးကျစေသော အချက်များ ကို ဖော်ပြပေးပါမည် …
လှပ၍ တောက်ပသော အရောင်ရှိရမည် အရောင် အသွေး စုံလင်စွာ ပါရှိရမည် အလင်းမှုန် မှ အလင်းပေါက် ကျောက်သားဖြစ်ရမည် အဂိတ် (သို့) အိုပယ် တိုးဝင်နေသော ကျောက်သားဖြစ်ရမည် သစ်သား အမျှင်အကြောများ ထင်ရှားစွာ ပါရှိရမည် အပင် ၏ သစ်သား ၏ အခေါက်အတိုင်း မပျက်စီးဘဲ လှပစွာ ရှိရမည်
အခက်အလက်များ အပေါက်ကြီးများ စသည်ဖြင့် မကျိုးမပဲ့ ရှိနေရမည် အပင်စားသော ပိုးကောင် အင်းဆက်ကြီး ကောင်များ အပင်အတွင်း ကျောက်ဖြစ်လျှက် ပါရှိရမည် အင်ကြင်းကျောက်ကို တန်ဖိုးကျစေသော အဓိက အချက်များ မွဲခြောက်ခြောက် အရောင်ရှိနေသော အလင်းပိတ်သော ကျောက်သားပွသောရွှံ့များ ထုံးဂျိုးများ ပါများစွာ ပါနေသော အချက်များသည် တန်ဖိုးကျစေပါသည်..
ကမ္ဘာ နိုင်ငံအချို့ တွင် ၁၉၇၂ ခုနှစ်ခန့် မှ စတင်၍ အင်ကြင်းကျောက် အလှဆင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် ရောင်းဝယ် သုံးစွဲနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ် ..ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး , မန်းလေးတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ကချင်ပြည်နယ် တို့တွင် အင်ကြင်းကျောက်များ တွေ့နိုင်ပါသည် ..
အင်ကြင်းကျောက်များသည် ကျောက်စိမ်းများကဲ့သို့ တနေရာထဲတွင် စုပြုံဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမရှိပါ .. ဟိုနေရာ တစ်ခု ဒီနေရာ တစ်ခု ပြန့်ကျဲ၍သာ တွေ့နိုင်ပါသည် .. သို့ဖြစ်၍ လုပ်ကွက်များ ရယူ၍လုပ်ကိုင်ရန် ခက်ခဲလှပါသည် ..
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် မှ ယနေ့အထိ ကျောက်စိမ်းများ များစွာထုတ်ယူနိုင်သော်လည်း အင်ကြင်းကျောက်ကို မည်သည့်နိုင်ငံတွင် မှ ကျောက်စိမ်းများထုတ်သလို ပေါများစွာ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ .. တွေ့ရခဲသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ရှားပါးခြင်း ဂုဏ်သတ္တအပြည့်ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည် .. မပျက်မစီးဘဲ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး မာဆင့် ၇ ရှိသော တာရှည်ခံသည့် သတ္တိလည်းရှိပါသည် .
အရောင်အသွေး အမျိုးနှင့် လှပသော သတ္တိလည်းရှိပါသည်.. အင်ကြင်းကျောက်ကို အိမ်ခြံအတွင်း ထားရှိလျှင်ဖြစ်စေ ဝတ်ဆင်လျှင်ဖြစ်စေ ကျန်းမာခြင်း ဥစ္စာ ကြွယ်ဝခြင်း အသက်ရှည်ခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း တို့ကို ပေးစွမ်းသည်ဟု ရှေးဟောင်းဂရိစာပေများ နှင့် မြန်မာ့လောကီ ပညာရှင်များ က မှတ်တမ်းများ ဆိုခဲ့ကြပါသည်
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာ့ အင်ကြင်းကျောက်များကို မြန်မာများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပြီး အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါသည်..
Total Hits : 333112